Ammonite (2020) | MM Movie Store
ဒီကားကိုတော့ ဒါရိုကျတာ Francis Lee ကရေးသားရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးတဈပုဒျဖွဈပါတယျတဲ့။ အဓိကဇာတျဆောငျနှဈဦးဖွဈတဲ့ Mary Anning နဲ့ Charlotte Murchison အဖွဈ Kate Winslet နဲ့ Saoirse Ronan တို့က ပါဝငျရိုကျကူးထားပါတယျ။ Girl Love ဇာတျလမျးတဈပုဒျလညျးဖွဈပါတယျ။
၁၈၄၀ခုနှဈမြားရဲ့ ကာလ Lyme Regis လို့ချေါတှငျတဲ့ အင်ျဂလနျတောငျပိုငျးကမွို့လေးတဈမွို့မှာပေါ့။ ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးဗဒေပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Maryဟာ ကမျးခွမှော Fossilsတှတေူး၊ သူမဆိုငျမှာခရီးသှားတှကေိုရောငျးခရြငျး နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့သူမအမကေိုလုပျကြှေးနသေတဲ့။
တဈရကျမှာ ခရီးသှားတဈဦးကသူ့ဆိုငျကိုရောကျလာရငျး အားနညျးတဲ့သူ့ဇနီးဖွဈသူ Charlotte ကိုဂရုစိုကျပေးဖို့ Mary ကိုငှားရမျးခဲ့ရာမှ နောကျပိုငျး Mary နဲ့ Charlotte တို့အခငျြးခငျြးခဈြမိသှားတဲ့အခါဘယျလိုဆကျဖွဈကွမလဲ? သူတို့နှဈယောကျရဲ့အခဈြကရောတညျမွဲပါ့မလား? ခွားနားတဲ့နောကျခံအခွအေနတှေကွေားသူတို့ဘာဆကျလုပျမလဲ?
ဒီကားကိုတော့ ဒါရိုက်တာ Francis Lee ကရေးသားရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဓိကဇာတ်ဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mary Anning နဲ့ Charlotte Murchison အဖြစ် Kate Winslet နဲ့ Saoirse Ronan တို့က ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Girl Love ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၄၀ခုနှစ်များရဲ့ ကာလ Lyme Regis လို့ခေါ်တွင်တဲ့ အင်္ဂလန်တောင်ပိုင်းကမြို့လေးတစ်မြို့မှာပေါ့။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Maryဟာ ကမ်းခြေမှာ Fossilsတွေတူး၊ သူမဆိုင်မှာခရီးသွားတွေကိုရောင်းချရင်း နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူမအမေကိုလုပ်ကျွေးနေသတဲ့။
တစ်ရက်မှာ ခရီးသွားတစ်ဦးကသူ့ဆိုင်ကိုရောက်လာရင်း အားနည်းတဲ့သူ့ဇနီးဖြစ်သူ Charlotte ကိုဂရုစိုက်ပေးဖို့ Mary ကိုငှားရမ်းခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်း Mary နဲ့ Charlotte တို့အချင်းချင်းချစ်မိသွားတဲ့အခါဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲ? သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကရောတည်မြဲပါ့မလား? ခြားနားတဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကြားသူတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲ?
Curiosa – Link 2
As God ( 2020 )